I-Downs izobhekana ne-Polokwane City | Scrolla Izindaba
I-Downs izobhekana ne-Polokwane City
I-Mamelodi Sundowns ikwazile ukugwema elinye iqembu le-DStv Premiership emdlalweni we-Nedbank Cup last 16 ngoMsombuluko. I-Downs, engompetha ababusayo kulo mqhudelwano, iqhathwe ekhaya neliqhudelana ku-GladAfrica Championship i-Polokwane City.
La maqembu womabili azana kahle futhi asehlangane kaningi ngenkathi i-City isadlala esigabeni esiphezulu. Kube nokuqagela ukuthi i-Sundowns ingahle iqhathwe neqembu elinomqondo wayo i-Orlando Pirates.
I-Pirates, nokho, izobhekana nezimbangi ezinzima emidlalweni we-last 16. Izodlala ekhaya ne-Maritzburg United edlala kwi-DStv Premiership.
Kunemidlalo emithathu kuphela ebone amaqembu e-DStv Premiership eqhathwa ndawonye. I-Black Leopards ibhekene naMaZulu ekhaya kuthi i-Tshakhuma Tsha Madzivhandila idlala ne-Swallows FC ekhaya.
Eminye imidlalo ibone amaqembu e-GladAfrica Championship edlaliswa ndawonye.
Izinsuku nezinkundla zemidlalo ye-Last 16 zizomenyezelwa yi-Premier Soccer League ngokuhamba kwesikhathi. NgoMsombuluko bekukhona umdlalo owodwa wokugcina wama-32 obudlalwa.
Ijezi le-Cape Town City kwi-GladAfrica Championship libangele okunye ukucasuka ngesikhathi bekhipha iqembu eliphambili. Ishaye i-Baroka FC ngamagoli amahlanu kwamane sekukhahlelwa amaphenathi.
Okucasule kakhulu kulo mqhudelwano wale sizini bekungeSonto lapho i-Kaizer Chiefs ibambe ongezansi yashiswa ibhuthi yiqembu le-First Division i-Richards Bay. I-Baroka, nokho, bekuyiqembu lokuqala elidale ukubuyela emuva ngesizini yowezi-2010/11 ngesikhathi lisadlala esigabeni esiphansi.
Bakhiphe i-Chiefs ku-last 16 kwathi ngoMsombuluko bashaywa ngezinduku zabo ngesikhathi i-Urban Warriors ibakhipha. Akubanga nokwehlukanisa la makilabhu womabili ngemizuzu engama-90 nangesikhathi esengeziwe. Umdlalo uphele ngegoli elilodwa kwelilodwa kwase kubanjwa amaphenathi ukuze kuthathwe isinqumo ngokulingana. I-Baroka yawahlula womabili amaqembu i-Swallows ne-Kaizer Chiefs ngaleyo sizini.
Nansi imidlalo ephelele ye-Nedbank Cup Last 16
I-Tshakhuma Tsha Madzivhandila TM vs i-Swallows FC, i-Chippa United vs i-Cape Town City, i-Pretoria Callies vs i-JDR Stars, i-Mamelodi Sundowns vs i-Polokwane City, i-TS Sporting vs i-Richards Bay, i-Cape Town All Stars vs i-Cape Town Spurs, i-Maritzburg United vs i-Orlando Pirates, i-Black Leopards vs AmaZulu.
Picture source: @NedbankCup